एकलौटी गर्ने, अरूले भ्वाङ टालिदिनु पर्ने ? « Naya Page
प्रकाशित मिति : 24 July, 2019 3:42 pm
पार्टी एकता घोषणा भएको १४ महिना पुग्न लाग्दा नेकपामा बल्ल एकताका बाँकी कामहरूले गति लिएको छ । ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये २८ जनाले पहिल्यै प्रदेश पदाधिकारीको जिम्मेवारी पाइसकेकोमा २ सय ३६ जनाले जिल्लाका इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज र महानगरपालिकाका इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
केन्द्रीय विभाग, मोर्चा संगठन, प्रवास आदि क्षेत्रका लागि केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको कार्यविभाजन बाँकी नै छ । साथै, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र निर्वाचन आयोग गठन गर्न पनि बाँकी नै छ । तथापि, अब जिल्ला तहमा पार्टीका कामहरूले गति लिने स्वाभाविक अपेक्षा बढेको छ ।
जिल्ला इन्चार्ज तथा सहइन्चार्जमा जिम्मेवारी तोकिएका कतिपय नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै नेतृत्वसमक्ष आफ्नो असहमति जाहेर गरेका छन् भने कतिपयले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य निकालेरै विरोध जनाएका छन् । कुन ठाउँमा कुन व्यक्ति उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा तय गरेर जिम्मेवारी बाँड्न असमर्थ भएपछि नेताहरूले पुरानो जिम्मेवारीलाई आधार बनाएका कारण यस्तो असन्तुष्टि आएको छ । साथै, दुई पार्टी एक भएर एउटै कमिटी बनाएका कारण एकातिर वरिष्ठहरू अर्कातिरको कनिष्ठको मातहतमा बस्नुपर्दा पनि समस्याहरू आएका छन् । तथापि, यी सबै अस्थायी कुरा हुन् र महाधिवेशन नहुन्जेलको संक्रमणकालीन अवस्था भएका कारण यस्ता समस्याहरू आउँछन् भनेर चित्त बुझाउनमा नेताहरू तल्लीन छन् ।
जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जसम्बन्धी सहमतिसँगै नेकपामा अहिले आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको कुन अवस्था छ भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ । यति सामान्य निर्णय गर्न पनि नेतृ्त्वलाई एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्नुले आन्तरिक अवस्थाको छनक दिन्छ । जिल्ला अध्यक्ष र इन्चार्जका हकमा एउटै निर्णय एक वर्ष पहिले गरिदिएको भए यतिबेलासम्म तलका कमिटीहरूले आकार लिएर आफ्नो काम सम्पन्न गरिसकेका हुन्थे । तर, नेतृत्व सिंहदबार र बालुवाटारको गोलचक्करमा फस्दा सामान्य निर्णय लिन पनि असामान्य समय लाग्न पुगेको छ ।
४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चित्तबुझ्दो र चाहेकै जिम्मेवारी दिन नेतृत्वलाई कठिन छ । तर, यसका लागि पनि एउटा मापदण्ड बनाउने हो भने सबैको चित्त बुझाउनचाहिँ कठिन थिएन । अहिले नेकपा धेरै केन्द्रीय सदस्य जननिर्वाचित प्रतिनिधि छन् । नेकपाको सार्वजनिक प्रतिनिधित्व तिनैले गर्दछन् र जनताले सीधै नेकपा भनेर चिन्ने पनि तिनलाई नै हो । यस्तो अवस्थामा आफूले जिम्मा पाएका स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका संसद्देखि सरकारहरूसम्म उनीहरूले जति राम्रोसँग काम गर्दछन्, पार्टीको सार्वजनिक छवि त्यति नै उज्ज्वल हुन्छ । तिनीहरूलाई पार्टीका तर्फबाट समन्वय गर्ने र काम गर्ने वातावरण मिलाउने दायित्व पार्टीको हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई पार्टी काममा अल्झाउँदा एकातिर पार्टीमा अरूले पाउने जिम्मेवारीमा संकुचन हुन्छ भने अर्कातिर सार्वजनिक काममा पनि समय पर्याप्त हुँदैन र कुशलता देखाउन सकिँदैन । त्यसले जननिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई त्यसै काममा ध्यानपूर्वक संलग्न हुन लगाएर योग्यता प्रमाणित गर्न लगाउने र बाँकीलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिने हो भने त्यसले दुवैका बीचमा सन्तुलन कायम गराउँथ्यो, सबैले जिम्मेवारी पाउँथे, पार्टी र सरकारका कामहरू प्रभावकारी हुन्थे र पार्टीले अपेक्षित गति लिन्थ्यो । तर, आन्तरिक खिचातानी र जोडघटाउका कारण यो काम हुन नसक्दा कसैलाई भारीमाथि भारी र कोही रित्तै हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थाले पार्टीमा असन्तुष्टि बढ्छ, त्यसले कुण्ठा बढाउँछ र अन्ततः नेतृत्वसँग ठोकिन्छ । यसो हुन नदिन योग्यता र रुचिअनुसारको काममा नेताहरूको शक्तिविन्यास गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।
नेकपामा अहिले कार्यकर्ताको मन जितेर निर्वाचनबाट आएको नेतृत्व छैन, सहमतिका आधारमा बनेको नेतृत्व छ । निर्वाचित भएर आएको नेतृत्व हुँदा जुन प्रकारको बल र आत्मसविश्वास हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा सहमतिका आधारमा बनेको नेतृत्वमा त्यो हुँदैन र उसले सहमति गर्ने पक्षहरूको चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । नेकपामा दुईवटा पार्टी मिलेर बनेको छ र ती दुई पार्टीलाई दुईजना अध्यक्षले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । तर, नेकपाको आन्तरिक जीवन हेर्दा यति मात्रै पक्ष हावी छैन । एमालेमा अध्यक्ष ओलीसँगै हाराहारी अवस्थामा रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई नजरअन्दाज गरेर कुनै निर्णय गर्न सम्भव छैन भन्ने एकपछि अर्का घटनाहरूले देखाइरहेका छन् । खासमा भन्दा अहिले नेकपामा कुनै नेताको बहुमत छैन ।
त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा कुनै दुई मिल्दा तेस्रो स्वतः कोपभाजनमा पर्छ भन्ने त प्रदेश नेतृत्व चयन गर्दा नेकपाभित्र माधव नेपाललाई किनारा लगाएबाट पनि देखिइसकेको छ । गणित माधव नेपालका हकमा मात्र लागू हुँदैन, अरूका हकमा पनि लागू हुन्छ । सायद यसैको परिणाम हुन सक्छ, असार लाग्दानलाग्दै सिंहदबार वरिपरिबाटै सरकारको आयु र हुँदै नभएका समीकरणबारे प्रायोजित हल्ला चलाइयो । बनको बाघले देख्दै नदेखे पनि मनको बाघले खाएर घाइते भएकाहरूबाट प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्धमा संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर अभियान चलाइएको र एक व्यक्ति एक पद भन्दै पदबाट हटाउन थालिएको भन्दै भित्रभित्रै प्रचार मात्र भएन, सार्वजनिक रूपमै माथिल्लै तहबाट आतंकित र अशोभनीय अभिव्यक्तिहरू पनि सार्वजनिक भए । यी सबै प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा अरूलाई दोष दिने कमजोर मानसिकताबाट आएका विकृत प्रचारहरू थिए । खासमा चाहिँ पार्टीको आन्तरिक जीवनबारे छलफल गर्न फुर्सदिला नेताहरू एक ठाउँ बस्दा आएका कम्पनहरूले मात्रै पनि नेकपाको आन्तरिक समीकरण र अवस्थाको चित्रण गर्न चाहिँ मद्दत पुर्याएका छन् ।
पार्टीमा कसैको बहुमत नभएको अवस्थामा मुख्य नेताहरू नमिली सुख छैन भने सरकारका कामहरूमा पनि सबैको स्वामित्व र हिस्सेदारी हुन आवश्यक छ । सरकारले एकलौटी काम गर्ने र सार्वजनिक भएका भ्वाङहरू अरूले टालिदिनुपर्ने अपेक्षा नै गलत हुन्छ । यसबीचमा हचुवाका भरमा ल्याइएका कारण सरकारका कामहरू प्रत्युत्पादक साबित भएका छन् । पक्कै पनि निर्णय गर्ने, कानुनको मस्यौदा बनाउनेजस्ता कामहरू सरकारको दायित्वभित्र पर्दछन् । दैनिक सरुवा, बढुवा वा प्रशासनिक अरू कामहरू गर्नमा सरकारलाई कसैले दख्खल दिन सक्दैन । तर, आमजनतालाई प्रभाव पार्ने कामहरूलाई पार्टीले सरकारको जिम्मामा छाड्न मिल्दैन ।
उदाहरणका लागि गुठीसम्बन्धी विधेयकले पार्टीलाई कति क्षति पुरायाएको छ भन्ने कुरा अहिले चर्चा गर्दा सरकारको आलोचना जस्तो होला । तर, त्यसका विरुद्धमा पार्टीका नेताहरू नै सार्वजनिक रूपमा नउभिएको भए र फिर्ता लिन सरकारलाई बाध्य नपारेको भए नेकपाले भोग्ने क्षति अझ ठूलो हुन सक्थ्यो । मिडिया काउन्सिल, मानवअधिकार आयोग, विश्वविद्यालय विधयकहरू हचुवाका भरमा ल्याइएका कारण पार्टीकै नेता–कार्यकर्ताहरू आलोचना गर्न बाध्य छन् । तरकारीमा विषादी परीक्षणसम्बन्धी अपरिपक्व निर्णय र भारतीय चलचित्र महोत्सवसम्बन्धी विवादास्पद निर्णयका विरुद्धमा सार्वजनिक रूपमा नेकपाकै नेताहरूबाट यत्तिकै अभिव्यक्तिहरू आएका छैनन् ।
यसमा दुईमत छैन, आफ्नो सरकारको आफ्नै नेता–कार्यकर्ताले आलोचना गर्नु शोभनीय हुँदैन र सरकारमा बस्नेहरूलाई त यस्तो कुरा झन् मन पर्दैन । तर, कतिपय कुराका लागि विरोध नहोस् भनेर पवित्र चाहना राखेर मात्र हुँदैन, त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रियामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेकपाका शीर्ष कमिटीहरू निष्क्रियप्रायः छन् । दोस्रो तहका प्रायः सबै नेता रहेको स्थायी समितिको बैठक नबसेको ६ महिना नाघिसकेको छ भने सचिवालय बैठक पनि क्षणिक मात्र हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले लिने कुनै नीतिगत निर्णयबारे पार्टीमा सहमति कायम गर्न र सरकारलाई सघाउन मुख्य नेताहरू रहेको उच्चस्तरीय कमान्ड किन नबनाउने ? प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा बन्ने यस्तो संयन्त्रमा आवश्यक छलफल गरेर निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीकै बोझ कम हुन्छ र मुख्य नेताहरू सहभागी भए पार्टीभित्रबाट हुन सक्ने आलोचना स्वतः कम हुन्छ । कुनै कुराको ओठे जवाफ दिनुभन्दा समाधानका उपायहरू अपनाउनु उचित हुन्छ । अर्थात्, नेकपालाई अघि बढाउन फेरि पनि सहमतिको विकल्प छैन ।
करोडौं राजश्व चुहावट गर्ने भाटभटेनी ‘सानो माछा’ हो र भन्या : दीर्घराज मैनाली (अन्तरवार्ता)
अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको राजश्व अनुसन्धान विभागलाई वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको समग्र आर्थिक सूचकहरु स्वस्थकर रही देशको अर्थतन्त्र सही ‘ट्रयाक’ मा
पछिल्लो समयमा बेलायतमा नेपालीहरुको उपस्थिति बढ्दै गएको छ । त्यसैमध्ये किरात राईहरुको पनि उपस्थिति बाक्लिँदै